Iyo inoda kuziva intrahistory ye solar sphere yeApple Watch | Nhau dze iPhone
Iyo inodakadza intrahistory yesolar sphere yeApple Watch
Miguel Hernandez | 09/05/2022 18:00 | Apple Watch, Apple zvigadzirwa
Iyo Apple Watch ine akawanda mativi, uye sekunge izvo zvanga zvisina kukwana, mazhinji acho anogoneka kusvika pakuneta. Ini handisi kushanda semuenzaniso kana referensi, sezvo ndanga ndichishandisa imwechete Apple Watch kumeso kubva 2016, asi izvo hazvireve kuti ini ndinogona kushamiswa mushure merondedzero yesarudzo iyo kambani yeCupertino inoita kuti iwanikwe kwatiri.
Isu tinokuudza iyo inodakadza intrahistory yesolar sphere yeApple Watch, iyo inovanza zvakavanzika kupfuura zvaungafungidzira. Zvione nesu, ndiani anoziva, pamwe unopedzisira wazvishandisa muzuva rako nezuva.
Kubva payakavambwa muna 2014, Apple yakawedzera zvakanyanya nhamba yemadhizari ayo smart wachi yake, uye nekudaro inonyanya kufarirwa inopfekwa munhoroondo, inokwanisa kuratidza. Kubva pamatunhu gumi ekuzvarwa kusvika kune anopfuura makumi matatu neayo anowirirana maitiro ayo anotibvumira kugadzirisa, nhasi kwanaya zvakanyanya, asi usazvinetse, iyo Apple Watch haina mvura.
Kunyangwe idi rekuti mazhinji acho akatarisana nekupa iyo yakanyanya ruzivo ruzivo munzvimbo diki diki, kune zvakare diki redoubt yasara kune romantics yezvenyeredzi neyekudenga, ndizvo zvaunza iwe pano nhasi uye chii chiri kuenda kuRega. ini ndikuudze chii chiri kuseri kwezuva kufona kweApple Watch.
Nekusvika kwewatchOS 6 muna Kubvumbi 2020, iyo solar dial yakatanga, asi dingindira iri rinotora zvakapetwa kaviri zvinoreva nekusvika kwechirimo. Iwe unogona kunge uri pakati pemamiriyoni evanhu vanotambura neSeasonal Affective Disorder (SAD). Kusvika kwechirimo kunokanganisa mamiriro edu epfungwa nezviratidzo zvakafanana neicho chekuora mwoyo kunozivikanwa, uye chaizvo imwe yemishonga yakanakisa yechirwere ichi chechinguvana ndeyekunakidzwa nechiedza chemasikati zvakanyanya.
1 Mashoko ezuva dial
2 Nzira yekunzwisisa sei kushanda kwesolar sphere
Mashoko ezuva dial
Chiso chezuva cheApple Watch chine dial ine gumi nemaviri notation asi iyo inoverengwa senge 12-awa wachi. Mariri, chikamu cheiyo dial chicharatidzwa muchiedza chebhuruu uye chimwe chikamu mune navy blue, munyaya iyi nzvimbo yakavhenekerwa ichataura chaizvo maawa ekupenya kwezuva atichanakidzwa nawo muzuva iroro zvichienderana nenzvimbo yatiri, saka, nzvimbo yerima ichareva chaizvo nguva dzehusiku. Muchidimbu, mutsara unosiyanisa mavara ose ucharatidza zvose kubuda nekunyura kwezuva.
Kune chikamu chayo, dial inotaridza nguva ichatevedzera kuve Zuva, nenzira imwechete yatichava neimwe diki yemukati nharaunda iyo inotiratidza iyo yakajairwa wachi, iyo yatinogona kugadzirisa kana tichida iyo analog fomati, kana kana tinochida chiri mudhijitari format. Uye pakupedzisira, makona mana ese echiso (nekuti Apple Watch iwachi ye "square") iripo kuti iwe uwedzere chero matambudziko, kuve kuti vamwe vavo vanozoenderana neiyo contour yenzvimbo yakasarudzwa, semazuva ese.
Zvakare, kana tikasarudza iyo dijitari subdial, isu tichapihwa ruoko rwechipiri kutenderedza awa marker, kuitira kuti tive nepamusoro-soro inogoneka.
Chekupedzisira, kana tikadzvanya sphere isu tinopihwa ruzivo nezve chaiyo nguva padanho rezuva rezuva ratiri, pamwe ne udzame pamusoro pemaawa ose ezuva atinofarikanya.
Nzira yekunzwisisa sei kushanda kwesolar sphere
Zviripachena ruzivo rwese urwu uye mavara akasiyana anopihwa nesolar sphere yeApple Watch yakagadzirirwa zvinopfuura kungoona kana kwave masikati neusiku. Chekutanga pane zvese, isu tichatanga nenheyo inogona kuparadza pfungwa dzako: Muchokwadi, mambakwedza/madekwana akaoma kunzwisisa kupfuura shanduko yepakati pemasikati neusiku.. Zvechokwadi, nguva chaiyo ichaenderana nekushandiswa kwaunoda kupa kubuda kwezuva, pamwe chete nenzvimbo yaunenge uri.
Kuti kunzwisisa kwako kuve nyore, tichashandisa izwi rekuti "mambakwedza", iro risinganyanyi kana kushomeka pane zviratidzo zvechiedza chisati chadoka uye kusati kwaedza. Izvo zvakati, zuva rekufona kweApple Watch rinoshandisa akakwana mashanu akasiyana mimvuri yebhuruu kumiririra nguva yemasikati (kana husiku) yatinozviwana tiri mairi, ngativaparadze kubva kune yakasviba kusvika kune yakareruka:
Mufananidzo: Solinruiz (PaWikiPedia)
Husiku: Iyo yakasviba ruvara rwedhiyari zviri nyore uye zvinongoratidzira husiku hwakavharwa.
astronomical twilight: Rudzi urwu rwedenderedzwa, rechipiri rakasviba zvakanyanya, richaratidza rudekwana rwenyeredzi, ndiko kuti, kana Zuva riri < 18º uye izvo zvinotibvumira kuona nyeredzi dzehukuru hwechitanhatu neziso rakashama.
Nautical Twilight: Panguva ino icharatidzwa kana Zuva riri <12º pazasi pehorizon. Asvika pano, nyeredzi dzekutanga neyechipiri ukuru dzichaonekwa neziso rakashama.
civil twilight: Rudzi rwekupedzisira rucharatidza kuti Zuva riri <6º pazasi pehusiku uye nekudaro, ese ekutanga magnitude nyeredzi nemapuraneti anogona kuonekwa.
Zuva: Rudzi rwakareruka rwedhiyabhorosi rucharatidza maawa emasikati akazara.
Aya ndiwo maitiro Apple yafunga kushanda zvine humbowo husina kujairika kumakambani akajairwa, asi zvakajairika mukambani yeCupertino, nharaunda iyo, kunyangwe zvese, inongoshandiswa semutemo wakajairwa nevadi venyeredzi. kana mukukanganisa kwayo avo vakaverenga chinyorwa ichi uye vafunga kutakurwa neino curious solar sphere.
Pasinei nezvose, inzvimbo yakaisvonaka yega, mumatoni ebhuruu anonakidza, kunyange Apple ichiomerera pane tsika yayo yekusapa matambudziko mumavara avo echisikigo mumativi ose, ndinofungidzira kuti nechinangwa chekuchengetedza mashiripiti. rudzi urwu rwemabhora akananga kune yega yega dhizaini. Chero zvazvingaite, inguva yakanaka yekuti iwe ugadzirise solar sphere yako paApple Watch, ikozvino unogona kunyemwerera nekuti unotoziva zvese zvayo ins and outs, unozviona nemeso mamwe chete here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo inodakadza intrahistory yesolar sphere yeApple Watch
Apple inogovera gadziriso yezvisizvo zvakavanzika zviziviso neAirTags
Mavara matsva eAirPods Max nekusvika kweAirPods Pro 2